यौन स्वास्थ्य - Onlinepatra.com
खानपान फिटनेस फेसन सम्बन्ध सौन्द्धर्य स्वास्थ्य टिप्स
योनीका आकार थरिथरिकाः यौनसन्तुष्टिमा फरक पर्छ ?
अनलाइनपत्र संवाददाता ७ असार २०७८, सोमबार १५:१८
व्यक्तिपिच्छे मानिसको अनुहार आकारप्रकार फरक फरक हुने गर्छ । सबै मानिसहरुको आकारप्रकार र रुप एकै हुने गर्दैन । ठीक यही कुरा योनी अर्थात् महिलाका प्रजनन अंगको मुख्य भागको हकमा पनि लागू हुन्छ । महिलाको योनीको आकारले के फरक पर्छ ? यो…
अनलाइनपत्र संवाददाता ७ असार २०७८, सोमबार १५:०१
साधारणतया कोही पनि स्वस्थ महिलाको महिनावारीका बेला हुने रक्तश्राव तीनदेखि पाँचदिनसम्म रहन्छ । यसले कतिबेला निकै तनाव पनि दिने गर्छ विशेषगरी बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा । तर कतिपय अवस्थामा आफ्नो महिनावारीको रक्तश्रावलाई प्राकृतिक रुपमा…
अनलाइनपत्र संवाददाता ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १८:१५
काठमाडौं - धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावारी भएको बेला (सेक्स)यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा जिज्ञासा रहने गरेको छ । तर यसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले भने फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले गरेको अधययन अनुसार…
अनलाइनपत्र संवाददाता २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २३:२३
यौन शिक्षाले यौनको सबै पहलहरूको बारेमा बताउँछ । यसमा यौनसँग जोडिएका भावनाहरु, जिम्मेवारीहरु मनुष्यको शरीरको रचना, यौन क्रियाकलाप, प्रजननता, यसको लागि सही उमेर, सुरक्षित यौन, जन्म नियन्त्रण वा यौनमा संयम जस्तो विषयहरुको बारेमा विस्तारसँग…
अनलाइनपत्र संवाददाता ३ आश्विन २०७७, शनिबार २०:३४
प्रायः महिलाहरु पुरुषहरुलाई स्वार्थी भन्छन् । किनभने पुरुषहरु महिलाहरुलाई केवल यौन सम्पर्कका लागि मात्र नजिकिन्छन् भन्ने लाग्छ । यो कुरा सबै महिलामा लागू हुँदैन । तर विभिन्न सर्वेक्षणका अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध अथवा लामो प्रेम…
अनलाइनपत्र संवाददाता २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार २१:३५
सबै महिलाहरु महिलाहरु आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै क्षणमा योनी चिलाउने समस्याबाट गुज्रिएका हुन्छन्। कहिलेकाँहि यसो हुनु सामान्य भएपनि लामो समयसम्म चिलाइराख्नु वा बारम्बार चिलाइराख्नु भने राम्रो होइन। महिलाको योनि चिलाउने समस्या धेरै…
तान्त्रिक सेक्स के हो, कसरी बनाउने यस्तो सम्बन्ध ?
अनलाइनपत्र संवाददाता २५ भाद्र २०७७, बिहीबार २१:४८
काठमाडौं - शारीरिक सम्बन्धका विभिन्न तरिकाका बारे धेरै थरि बहस हुन्छ। यीनै बहसहरु मध्ये पछिल्लो समय चर्चा सुरु भएको छ तान्त्रिक यौन सम्पर्कको। तान्त्रिक यौन, अलि भिन्न लाग्न सक्छ यो सन्दर्भ। वास्तमा यो यौनको कुनै अनौठो गतिविधि भने…
कुन समयमा यौ*नसम्बन्ध राख्दा भइन्छ गर्भवती ?
अनलाइनपत्र संवाददाता १३ भाद्र २०७७, शनिबार २३:३३
विवाह भएको केही महिनामै साथीसँगी तथा आफन्तजनको प्रश्न आइरिन थाल्छन्, खुसीको खबर कहिले सुन्न पाइन्छ ? उता दम्पतीको ताक अर्कै हुन्छ । पहिले करिअर निर्माण अनि मात्र फेमेली प्लानिङ । हिजोआजका विवाहित जोडीहरू योजना बनाएर मात्र शिशुलाई…
अनलाइनपत्र संवाददाता ११ असार २०७७, बिहीबार ००:४७
यौन सम्बन्ध शारीरिक सुखका लागि मात्रै होइन । यौन सम्बन्धले शारीरिक सुखसँगै मानसिक रुपमा पनि व्यक्तिलाई सहज अवस्था प्रदान गर्छ। यसका विभिन्न स्वास्थ्य फाइदा पनि छन् । यौन सम्पर्कका बोला शरीरबाट केही यस्ता हर्मोनहरु बाहिरिन्छन्, जसले…